အစမှအဆုံးတိုင် ပြီးမြောက်ခြင်းမရှိသော်ငြားလည်း စာပေတန်ဖိုးကြီးမားသည့် J.A. STEWART ၊ C.W.DUNN ၊ H.F.SEARLE ၊ A.J.ALLOTT နှင့် ဒေါက်တာလှဖေတို့၏ BURMESE – ENGLISH DICTIONARY နှင့် ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် အပိုင်း ၅ “ဆ”အက္ခရာအထိ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပြီး ရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့သော တက္ကသိုလ်မြန်မာအဘိဓာန်တို့၏ ပြုစုပြီးသမျှတို့ကို ပြန်လည်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း
၃၇ ရက်မြောက်နေ့အစီအစဉ် (၂၃ . ၉ . ၂၀၁၆)
(၃၇) ရက်မြောက်နေ့မှတ်တမ်း (၂၃.၉.၂၀၁၆)
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း၊ လားရှိုးမြို့နယ်၊ အမှတ်(၁၂)ရပ်ကွက်နေ တောင်သူတစ်ဦး ပိုင်ဆိုင်သည့် လယ်နှင့်ခြံမြေများကို သိမ်းဆည်းခဲ့ခြင်း နှင့် စပ်လျဉ်း၍ သိရှိလိုသည့်မေးခွန်း
မွန်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ ကျောက်ထုတ်လုပ်ရေးမိုင်းများအား တရားဝင် ခွင့်ပြုချက် ရှိ/မရှိ ပြန်လည်စိစစ် စစ်ဆေးပေးရန် အစီအစဉ် ရှိ/မရှိ နှင့် စပ်လျဉ်းသည့်မေးခွန်း